Sheekh Mahad Warsame Abuu C/Raxmaan Oo Jeediyey Kalimad Muhiim Ah Oo Ku Saabsan Xaaladda Jihaadka Bariga Africa [DHAGEYSO] – Shabakadda Amiirnuur
Maxaa Cusub, Muxaadaraad, Uncategorized, Wararka Gudaha
May 13, 2019 9:31 am by admin Views: 670
Kalimadan oo ay baahisay mu’asasada Alkataa’ib lana dhageysan karo muddo 19 ayuu Sheekh Mahad Warsame Abuu C/Raxmaan kaga hadlayaa arimo dhowr ah oo ku saabsan Jihaadka ka socda bariga Africa, kuna soo gudbinayo fariimo muhiim ah oo ku wajahan Muslimiinta iyo Mujaahidiinta.
Sheekh Abuu C/Raxmaan ayaa ugu horreyn bogaadinaya weerarkii halyeeynimo ee horaantii sanadkan ay Mujaahidiintu ku qaadeen magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya, halkaas oo lagu dilay ugu yaraan 50 ruux oo isugu jirta Yahuud iyo Nasaaro iyo weerarkii agu khaarijiyey gaalkii aflagaadeeyey Rasuulka Allaah –Salalaahu Caleyhi Wasallam- ee ka dhacay magaalada Gaalkacyo.
“Waxaana mudan In Allaah looga mahadceliyo camaliyaddii Barakeysneyd ee ka dhacday Nairobi laguna dilay tiro Saliibiyiinta iyo Yahuuda ah, Camaliyaddaas Barakeysan ee lagu difaacayayey Muqaddasaatka Islaamka ayaa ahayd mid ka mid ah malxamadaha Casrigan Taariikhda diiwaangalineysay. Waxaa iyaduna xusid mudan camaliyaddii barakeysneyd ee Mujaahidiintu ka fuliyeen magaalada Gaalkacyo taas oo lagu dilay Museylamihii Somalia ee Nabinimada sheegtay” ayuu yiri.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu Sheekh C/Raxmaan isdultaag kooban ku sameeyey cadeymaha ay banaanka soo dhigtay camaliyadii Gaalkacyo ee muujinayey dabadhilifnimada maamullada gaallo kalkaalka ah ee k a jira wadanka, isagoona Umadda ugu baaqay inay la Jihaadaan maamuladan ku xiran xabashida Itoobiya iyo Mareykanka.
“Waxaa hubaal ah in maamulka ridada ee Somalia uu gabbaad hooy iyo difaacba siiyay Dajaalkaas, waxa uu usoo gurmaday waa murtadiintii Mareykanka hoos tageysay ee loo carbinayay la dagaalanka Towxiidka, wa murtadiinta iyo gaalada cidda ka tacsiyeysay ama cambaareysay difaacii nabigeena Muxamed salallaahu Caleyhi Wasalam” ayuu yiri
“Waxaa waajib naga saaranyahay inaan ku Jihaadno cadowga caadeystay daadinta dhiiga Muslimka Itoobiyaankana gacal iyo sokeeye ka dhigtay waa nidaamka waxa loogu yeero federaalka kuwa caadeystay iney u basaasaan diyaaradaha Mareykanka ee Umaddeyna la beegsada duqeymaha joogtada ah. isbitaalkii Saakow ayey duqeeyeen,macaahidii Quraanka ayeey burburiyeen, da’yartii Quraanka baraneysay ayey laayeen, qaar kalane wey qafaasheen. waayeelo, dumar iyo caruur waxey daayeen ma jirto” ayuu yiri.
Xurmada Dhiigga Qofka Muslimka
Sheekh Abuu C/Raxmaan ayaa si adag kaga hadlay xurmada dhiigga qofka Muslimka ah iyo halista in lagu dhiirado daadinta dhiigga Muslimiinta ee Xaaraanta ah, Isagoo Mujaahidiinta ku adkeeyey inay aad isaga ilaaliyaan daadinta dhiigga Muslimiinta, wuxuuna soo guuriyey Aayado qur’aan ah iyo Axaadiith uu ku bidhaaminayo halista ka imaaneysa in si xaq daro ah lagu daadiyo dhiigga qofka Muslimka ah.
“Qodobka 2aad maadaama Jihaadka iyo loolankan cadowga kula jirno ka aloosanyahay dadkeena Muslimiinta ah dhexdooda waxaa nala ka doonayaa koow inaan ka taxadirno oo ka fogaano daadinta dhiiga qofka Muslimka ah si xaq daro ah, waxaa xaaraan naga ah inaan fudadeysano dhiiga Muslimiinta,waana inaan ogaanaa halista ay leedahay in la daadiyo dhiig Muslim oo Xaaraan ah” ayuu yiri.
Fariimo Muhiim ah
Ugu dambeyntii wuxuu Sheekhu kalimadiisa ku soo gabagabeeyey fariimo dhowr ah oo ku wajahan dadka Muslimiinta ee ku nool magaalooyinka uu heysto gumeystaha, iyo Mujaahidiinta la hardamaya cadowga ku soo duullay wadanka kuwaas oo uu booriyey inay sii laba jibaaraan halgankooda.
“Fariinta 1aad waxey ku socotaa Mujaahidiinta waxaan ugu dardaarmayaa nafteyda iyo naftooduba cabsida Allaah iyo inaad Cadowgiisa naafeysaan weeraradana aad u joogteysaan, Kamiinada xiriirisaan,dhiiga walaalihiina Muslimiintana aad si adag uga taxadirtaan, waa god Naareed ee ha sahlanina, Jihaadkeenuna waxaa waajib nagu ah inaan ka ilaalino Guluwiga iyo Irjaaga. Waxaad ku dadaashaan camaliyaatka Istish-haadiga, naftiinana uga sheekeeya waxaadna ogaataan inay san jirin wax cadowga uga daran Camaliyaatka Istish-haadiga iyo Qaraxyada Miinada ee qaraxyada u laba-laaba oo laaya, midey ku qaraxdo iyo mid ku qarwa ka dhiga” ayuu yiri.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri: “fariinta 2aad waxey ku socotaa dadka Muslimiinta aan ka dhex jihaadeyno Walaalayaal waxaad ogaataan cidda aan beegsaneyno iney tahay Cadowga Kirishtaanka ah iyo xukuumadda Ridada oo ay ugu horeeyaan hogaanka Ridada, ciidanka, saraakiisha, Xildhibaanada, Waziirada, waxa loogu yeero garsoorka, jawaasiistooda iyo dhamaan Laamahooda kala duwan. Marka yaanan idiin saameyn beenta iyo dacaayaatka raqiiska ah ee Cadowga faafinayo sidaas daraadeed ka fogaada xarumaha Cadowga daganyahay iyo meelaha uu ka dhaw yahay si aan waxyeelo idiin kaga soo gaarin weerarada Mujaahidiinta ay la beegsanayaan Cadowga Allaah” ayuu yiri.
Sheekh Abuu C/Raxmaan wuxuu sheegay in maanta xaalada Jihaadka bariga Africa uu marayo marxalad aad u wanaagsan oo uu ka awood badan yahay sidii hore, islamarkaana ay Mujaahidiintu afka ciidda u dareen cadowga soo duulay isagoo heysta hub, awood iyo qalab ku filan, taasna ay ku timid fadliga iyo garab istaagga Allaah.
Halkaan Ka Dhageyso Kalimadda MP3
Toos udaawo Kalimadda
Halkan si toos ah uga degso MP4